qof Soomaali ah oo caawa toori lagu galiyay Kristiansand - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub qof Soomaali ah oo caawa toori lagu galiyay Kristiansand
Dhacdadan ayaa ka dhacday maqaaxi kutaal bartahama Kristiansand oo ay soomaali leedahay. Qofka toorida lagu dhuftay ayaa markiiba loola cararay isbitaalka sida ay sheegeen police-ka. Xaalada qofkan midida lagu galiyay ayaa mareysa meel aan wanaagsaneyn oo halis ah, sida laga soo xigtay isbitaalka sørlandet Kristiand.
Qofka falkan geystay ayaa ku baxsaday lug, wuxuuna muuqaalkiisa u ekaa qof ajnabi ah, ayna u badantahay inuu yahay soomaali kale. walina gacanta lagu soo dhigin. booliska ayaa wali wareysi kula jira afar qof oo joogay meesha falku ka dhacay.
Previous articleMaamule iskuul kuyaal Oslo oo keenay hab cusub oo kula kulmi karo waalidiinta uusan waligood la kulmin.
Next articleSafia Abdi Haase oo markii labaad ku guulaysatay bilad sharaf .